July 2020 - Top MM News
မြောက်ကိုရီးယား KAESONG မြို့ ကို LOCKDOWN ချလိုက် ပါပြီ
Covid-19 ရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့ လူနာ ကို သောကြာနေ့နေ့လည် က အဲ့ဒီမြို့မှာတွေ့ရ လို့ဖြစ်တယ် လို့ KCNA မြောက်ကိုရီးယား သတင်းဌာန က ကြေညာသွား ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ် လောက် က တောင်ကိုရီးယား ကို ထွက်ပြေးသွားသူဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လထဲ မှာ မြောက်ကိုရီးယား ကို ပြန်ခိုးဝင်လာသူ
ကိုဗစ်သတင်းတွေ ရှေ့နောက် မညီတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားမှာ တကယ်ကူးစက်သူ သောင်းနဲ့ချီ ရှိနေပြီလား?
မြောက်ကိုရီးယားက ကေဆောင် မြို့ကို လော့ဒေါင်း ချလိုက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့လူနာကို သောကြာနေ့နေ့လည်က အဲ့ဒီမြို့မှာတွေ့ရလို့ဖြစ်တယ်လို့ KCNA မြောက်ကိုရီးယားသတင်းဌာနက ကြေညာသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီလူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ် လောက်က တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးသွားသူဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လထဲမှာ မြောက်ကိုရီးယားကို ပြန်ခိုးဝင်လာသူ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အဲ့လောက် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်လို့ လွယ်ကူသလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလူကို အသွားအလာထိတွေ့မှု အသေအချာကန့်သတ်ထားပြီး သူနဲ့
ရုရှားသမ္မတ ပူတင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ အချက်အလက်များ
Shwe Khit ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခေါက်မှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအကြောင်းပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သူဘယ်သူလဲဆိုတာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ လူသိနည်းလှသော ထူးထူးဆန်းဆန်း အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးမှာမို့လို့ ဗဟုသုတရအောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ဦးနော်…. ၁။ ရုရှားသမ္မတ ပူတင်ဟာ